November 2016 | Myanmar Computer Professionals Associations
Submitted by mcpa on Wed, 11/30/2016 - 10:21
MCPA ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အားမရဘူးလား ။ ကိုယ်တိုင် ထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်ချင်သလား အသဲကြားက မဲတပြားနဲ့ အခုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါ။
၁။AM, PM, FM, HM member မည်သူမဆို အလုပ်အမှုဆောင် အဆိုပြုလွှာပေးပို့နိင်ပါသည် ။ နှစ်စဉ်ကြေး အကြေအလည်ပေးသွင်းပြီးသူ တော့ဖြစ်ရပါမယ်။
http://www.mcpa.pro လင့်သို့သွားပြီး စာရင်းပေးသွင်းနိင်ပါသည်။. အွန်လိုင်းမှာဖြည့်လိုက်ပါ ။
မဲပေးမည့် မည့်သည့်အသင်းသားမဆို နှစ်စဉ်ကြေး ပေးသွင်းရန်ကျန်ရှိပါက ပေးသွင်းရန်တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်။
အသင်းရုံးမှ အချက်အလက်များစီစစ်ပြီး မဲပေးရမည့်အချက်အလက်များအား ပြန်လည်ပေးပို့မည်။ စစ်ပေးမယ် ဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးမယ်နော်
တိုင်း/ပြည်နယ်အသင်းများအတွက် သတ်မှတ်ရက်များအတွင်း online voting မဲပေးရန်။
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်နေ့ နံနက် (၁၁)နာရီ မတိုင်မီတော့ မဲပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Read more about မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရဲ့ အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အသင်းသားများမှမဲပေးနိုင်
Submitted by mcpa on Fri, 11/25/2016 - 14:48
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၇ − ၁၈)တွင် MICT Park ၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Developer Conference 2016 အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် လက်မှတ်များကို အောက်ပါနှုန်းထားများအတိုင်း အောက်ပါလိပ်စာများတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့မှ စတင်ပြီး ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Professional Member – Free
Student Member – 3,000 Ks
Other – 5,000 Ks
On Event Day – 10,000 Ks
MCPA Office - Building (9), Ground Floor, MICT Park.
MCC Computer Center – Theingyi Zay, C Ward, Third Floor, Pabedan Township.
Gusto College - No(289/A), Pyay Road, Sanchaung Township.
KMD Center (1) - No(331) Pyay Road, Myaynigone, Sanchaung Township.
KMD Center (2) - Build No(30/31), Insein Road, Kamaryut Township.
Micro Computer - No(143), Ground Floor, (46) Street, Upper Blk, Botahtaung Tsp.
Kanaung Hub - Build(14), 5th Floor, MICT Park, Hlaing Township.
Read more about Developer Conference 2016 အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် လက်မှတ်များကို အောက်ပါနှုန်းထားများအတိုင်း အောက်ပါလိပ်စာများတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်
Submitted by mcpa on Fri, 11/25/2016 - 14:30
အ.ထ.က (၁) ပန်းဘဲတန်းကျောင်းသို့ (၂၃-၁၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့၌ သွားရောက်ဟောပြောခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးရုံးမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထွန်းအေးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးငြိမ်းဦး နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင် ဦးဘုန်းပြည့်ဦး တို့က ICT နှင့် ပတ်သက်သည့် နည်းပညာရပ်များနှင့် အသုံးချမှုများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်းကို နံနက် (၉) နာရီမှ (၁၁) နာရီအထိ ဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Read more about MCPA ICT နည်းပညာ ပညာပေး ဟောပြောပွဲကို အ.ထ.က (၁) ပန်းဘဲတန်းကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့
Submitted by mcpa on Fri, 11/25/2016 - 14:21
~ စာပေလောက (၂)
~ Tab Book Center
~ Today Book Shops
~ စာပေလာက (၆) စသည့် ဆိုင်များတွင် ဖြန့်ချီထားပါသည်။
MCPA Member များအနေဖြင့် အသင်းရုံးခန်း အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ်၊ MICT Park၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေတွင် တစ်အုပ် (၉,ဝ၀ဝ) ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Read more about ဒုတိယအကြိမ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချီသည့် MCPA Professional Series #3.1 - Cisco စာအုပ်ဝယ်ယူနိုင်
Submitted by mcpa on Fri, 11/25/2016 - 14:01
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇ − ၁၈) တွင် MICT Park ၌ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Developer Conference 2016 အခမ်းအနားအတွက် စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကို (၂၃ − ၁၁ − ၂၀၁၆) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လယ်(၁း၀၀) နာရီတွင် အစည်းအဝေးခန်း(၃)၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ်၊ MICT Park ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ Developer Conference ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းခိုင်၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်မိုးထွန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်းထွန်းတို့မှ ရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။
Read more about Developer Conference 2016 Yangon စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း
Submitted by mcpa on Fri, 11/18/2016 - 15:57
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး နှင့် ကရင်ပြည်နယ် စသည့် ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အသင်းများတွင် ၂၀၁၆-၂၀၁၈ ခုနှစ် သက်တမ်းအတွက် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အား ရွေးကောက် တင်ေမြှာက်၍ ဖွဲ့စည်းရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
၂။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ဆန္ဒပြုသူ များသည် အောက်ပါအရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီသူများဖြစ်ရပါမည်။
(က) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ (၃၀) ရက်တွင် အသင်း၀င်သက်တမ်း (၁) လနှင့် အထက်ရှိသူ
(ခ) အဆိုပြုသည့်နေ့တွင် အသင်း၀င်နှစ်စဉ်ကြေးများအား ပေးသွင်းပြီးသူ ြဖစ်ရမည်။
(ဂ) အသင်း၀င်အဆင့်သည် Associate Member (သို့) Professional Member (သို့)
Fellow Member အဆင့်ရှိသူ ြဖစ်ရမည်။
(ဃ) အသင်း၏ လုပ်ငန်းများတွင် ကိုယ်တိုင်တက်ကြွစွာ ဦးဆောင်ပါ၀င်ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရ မည်။
(င) အသင်းမှ ချမှတ်ထားသော မူ၀ါဒ၊ ေရှ့လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်
အကောင်အထည်ေဖာ်မှုများတွင်တွးခေါ် ကြံဆ အကြံပြု ဆွေးနွေး
(စ) အသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သော
တာ၀န်ဝတ္တရား များကို ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ပါဝင်စားသော အသင်းသားများသည် ပတ်စ်ပို့အရွယ် ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံနှင့် မှန်ကန်ြပည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ပြီး ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ေရးထိုးထားသော ဆန္ဒပြုလွှာတို့အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်၊ ညနေ (၃) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၊ အီးမေးလ်-office@mcpamyanmar.org, ဖုန်း-၀၁ ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉ ၇၃၀၈၈၃၀၀ များနှင့် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်၍ ဆန္ဒပြုလွှာများ ပေးပို့ကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
(ဆန္ဒပြုလွှာများကို www.mcpamyanmar.org တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။)
၂၁-၁၂-၂၀၁၆ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (၀၁-၆၅၂၂၇၆, ၀၉ ၅၀ ၆၇၁၆၃)
၁၀-၁၂-၂၀၁၆ (စနေနေ့) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (၀၂-၆၉၃၁၃, ၀၉-၇၉၇ ၇၇၇ ၂၉၆)
၁၁-၁၂-၂၀၁၆ (တနင်္ဂနွေနေ့) - ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး (၀၉-၄၂၂ ၅၁၅ ၇၀၃, ၀၉-၄၅၁ ၂၃၆ ၅၃၇)
၁၁-၁၂-၂၀၁၆ (တနင်္ဂနွေနေ့) - စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး (၀၉-၄၀၀ ၄၀၁ ၉၄၈, ၀၉-၄၀၀ ၄၅၄ ၅၂၃)
၀၉-၁၂-၂၀၁၆ (သောကြာနေ့) - မွန်ပြည်နယ် (၀၉-၇၉၂ ၃၆၀ ၂၈၃, ၀၉-၄၃၀ ၀၄၇၈၀)
၁၁-၁၂-၂၀၁၆ (တနင်္ဂနွေနေ့) - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (၀၉-၅၃၀၀ ၆၆၃, ၀၉-၄၂၈ ၁၉၈ ၁၂၂,
၁၀-၁၂-၂၀၁၆ (စနေနေ့) - မကွေးတိုင်းဒေသကြီး (၀၉-၅၃၄ ၃၁၆၆, ၀၉-၅၃၄ ၁၁၅၀)
၁၀-၁၂-၂၀၁၆ (စနေနေ့) - ကရင်ပြည်နယ် (၀၉-၅၆၆ ၁၉၈၉, ၀၉-၅၁၃ ၆၄၁၇)
Read more about မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အသင်းများမှ အသင်းသူ/ အသင်းသားများသို့ အသိပေးကြေညာချက်